हिन्दी चलचित्र बर्फिको माध्यमबाट चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल नेपाली कलाकार – Namaste Filmy
नेपाली रंग मञ्चका परिचित नाम हो भोला सापकोटा । उहाँले सडक नाटकबाट प्रारम्भ गरेको कलायात्रा टेलि सिरियल लगायत धेरै स्टेजहरुमा नाटकको माध्यमबाट कलाकारिता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ । उहाँ एक दशक सम्म गुरुकुलसँग आबद्ध भएर नाटकहरुमा संलग्न हुदै आइरहनु भएको थियो । उहाँले आफ्नो जीवनको उर्वर समय रंगमञ्चमा नै सर्मपण गर्नु भयो । उहाँ निरन्तर १७ वर्ष सम्म नेपाली रंगमञ्चमा देखीनु भयो । सन् २०१२ मा रिलिज भएको हिन्दी चलचित्र वर्फिका एक पात्र भोला सापकोटा पनि हुन् । बर्फीमा हिन्दि चलचित्रका स्टार कलाकार रणवीर कपुर र प्रिंयका चोपडा सँग देखिनु भएको छ । अत्यन्त सरल मिजासका उनलाई कसैसँग फुर्ति लडाउनु पनि छैन र कसैको फुर्ति–फार्ति पनि मन नपर्ने कुरा बताउनु हुन्छ । कलाकारिता क्षेत्र नै आफ्नो अनन्त यात्राको क्षेत्र हो भनी स्विकार्नु हुन्छ । जहाँ पुगे पनि आफ्नो मन र तन जहिले पनि नेपाली नै हुन्छ भन्नु हुन्छ । चर्चित भारतिय निर्देशक अनुराग वासुद्धारा निर्देशित हिन्दी रोमान्टिक चलचित्र बर्फीको प्रर्दशन पछि उहाँको कलाकारिताबाट धेरै नेपाली दर्शकहरु पनि राम्रै परिचित भएका छन् । उनै कलाकार सापकोटा सँगको कुराकानीको छोटो अंश प्रस्तुत गरिएको छ .
प्रश्न ः नेपाली रंगमञ्चलाई चट्टक्क छोडेर बलिउड तिर भुल्नु भयो नी ?
उत्तर ः हाहाहा……। मैले नेपाली रंगमञ्चलाई चट्टक्कै छोडेको पट्टक्कै होइन । मैले वलिउडमा पाएको अवसरको सदुपयोगका लागि मात्र बलिउडको यात्रा प्रारम्भ गरेको हँु ।
प्रश्न ः हिन्दी चलचित्र बर्फीले त तपाईलाई छिट्टै परिचित गरायो नी, कस्तो चलिरहेको छ त बलिउडको यात्रा ?
उत्तर ः हो, वास्तवमा आदरणीय भारतिय चर्चित निर्देशक अनुराग वासुद्धारा निर्देशित चलचित्र वर्फिले मलाई नेपाल र भारतमा मात्र नभएर विश्वमा नै नेपाली कलाकार भनेर चिनाउने अवसर प्राप्त गरेको छु । बलिउड पुर्ण रुपमा ब्यावसायिकता भएको क्षेत्र भएकोले पनि काम गर्ने राम्रो वातावरण रहेको छ । सबै नै सहयोगी छन् । मैले बलिउडको यात्रामा आनन्द महसुस गरिरहेको छु ।
प्रश्न ः बर्फिले तपाईलाई बलिउडमा कुन स्थानमा पु¥यायो भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
उत्तर ः कुन र कस्तो स्थानमा पु¥यायो भन्ने त मैले मूल्याकंन गरेको छैन र गर्ने समय पनि भएको छैन भन्ने लाग्छ । तर चलचित्रका नायक रणविर कपुरले विभिन्न स्टेजहरुमा र प्रत्येक पटकको पुरस्कार सम्मान कार्यक्रमहरुमा मेरो नाम नलिई आफ्नो सम्मान पनि अधुरो रहने उद्घोष गर्दैरहनु भयो । त्यो नै मेरो कलाकारिताको प्रशंसा थियो । यो मेरो प्रशंसा र लोकप्रियता हो भन्ने पनि ठानेको छ, र म आनन्दको स्थानमा पुगेको छु भन्ने लागेको छ ।
प्रश्न ः बलिउडमा अहिले केमा ब्यस्त हुनु हुन्छ, अनि नेपाली चलचित्रहरुमा समय मिलाउने बिचारमा हुनु हुन्न ?
उत्तर ः बलिउडमा धेरै चलचित्रहरुबाट अनुरोध त आइरहेको छ तर निर्देैशक शौरभ शुक्लाको चलचित्र “यात्रा”मा चाहि कुरा अलि अगाडि बडिरहेको छ । नेपाली चलचित्रमा पनि राम्रो कथा वस्तुहरुमा सुहाउँदो रोल छ भने नाई भन्दिन ।
प्रश्न ः बलिउड मार्फत नाम र पहिचान त बनाउनु भयो । नेपाल र नेपालीहरुलाई चाहिँ के दिनु भयो त ?
उत्तर ः मैले पाएको अवसरको सदुपयोग गरेको थिए । चलचित्र सफल पनि भयो । प्रशंसा पनि बटुल्न सफल भएँ । तर यो होईन की मैले मेरो नेपाली माटो र आफु हिंडेको बाटोलाई लत्याएको छु । जहाँ जहाँ पुगे पनि र जे गरिरहे पनि मन भरी नेपाल र नेपालीको भारी बोकिरहेको अनुभूति भइरहन्छ ।
प्रश्न ः तपाईको बलिउडमा कलाकारिताको यात्रा कहिले सम्म अगाडि बढीरहला भन्ने ठान्नु भएको छ ?
उत्तर ः कलाकारिता प्रर्दशन गर्ने हो । बाँच्न र बचाउनको निमित्त पारिश्रमिक लिने हो । जवानीको सम्पुर्ण समय यसैमा समर्पण गरेको छु । अरु कला र पेशा अपनाउने कहिल्यै कल्पना पनि गरिएन । जाने कै यहि कलाकारिता छ । कलाकार हुँ यसमा भूगोल र समयको सिमा हुन्दैन । प्रयाश गर्दै जाने छु । हेरौं समयले कहाँ सम्म पु¥याउँदो रहे छ ।
प्रश्न ः अन्तिममा नेपाली युवाहरुलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
उत्तर ः देशमा बेथिती बढ्दो छ । देशको वर्तमान विषम अवस्थाबाट आत्तिनु हुँदैन । धैर्य गरौं, हतार नगरौं । जुनसुकै पेशा र क्षेत्रहरुमा पनि अवसरहरु रहेका हुन्छन । तर बुझेर, सोचेर सम्झेर पाइला अगाडि बढाउनु पर्दछ । अवश्य पनि सफलता प्राप्त
गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु । धन्यवाद .
'तामाङ चलचित्र संघ'मा नयां कार्य समिति ।